7 Sababood Oo Kuu Diidaya Inaad Ka Daba Cararto Nin Aanan Ku Rabin
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»7 Sababood Oo Kuu Diidaya Inaad Ka Daba Cararto Nin Aanan Ku Rabin
Aayaha editor Send an email January 29, 2021
Waqtiyadii hore, haweenku waxay ahaayeen kuwo isqiimeeya oo raggu ay ka daba cararaan; laakiin waa lasoo dhaafay maalmahaas. Arrimuhu way isbadaleen maalmahan waxaana caadi noqotay dumarka inay ceyrsadaan ragga xitaa marka ay cadahay inuusan dooneyn in la ceyrsado.
Markii aad ka daba cararto ragga qaar, waxaad kor u qaadeysaa hankiisa iyadoo saameynta ka dhalan karta laga yaabo inaysan fiicnaan.
Runtu waxay tahay, haddii uu ku rabo oo uu rabitaan yar kaa arko, waxaa laga yaabaa inuu dadaal walba ku bixiyo siduu kuu heli; laakiin waxaa suurtagal ah inay dhacaan waxyaabaha soo socda markii aad si aad ah uga daba orodo nin.
1. Galmo kaliya
Tani waa xaqiiqo markaad dabagasho nin aan runtii rabin in la dabagalo. Wax jacayl kuuma qabyo mana ku jeclo; sidaa darteed waxay u badan tahay inuu kuu galmoodo oo uu kugu dangaaro ilaa uu ka daalayo.
Kani waa qodob aad u macquul ah oo ay tahay inaad ka fekerto markaad ka daba ordeyso nin.
2. Waxaad qalbigaaga siineysaa qof aanan u qalmin
Qalbigaaga, jacaylkaaga, kalgacalkaaga iyo dareenkaaga waa in la siiyaa qof runtii u qalma. Siinta qalbigaaga qof aan u qalmin taas waxay lamid tahay inaad qabri u qodatid naftaada.
Maxay tahay sababta uu qof u sameynayo sidaas?
3. Ma waarayo xiriirka
Markaad kadaba cararto oo aad dadaal walba ku bixiso inaad hesho ninka loogu yeero riyadaada, xiriirkas mudo gaaban kaliya ayuu jiri karaa.
Xaqiiqda ah inaad isaga qabatay macnaheedu maaha inuu sii socon doono xiriirkaas; xiriirada noocaas ahi weligood ma waaraan.
4. Hal dhinac
Waxay u badantahay in xiriirku noqdo mid hal dhinac ah. Marka haweeneyda ay ka daba orodo islamarkaana dadaal walbaa ay sameyso si ay u hesho ninka, waxaa jirta suurtagalnimo in xiriirkaas uusan noqon doonin mid laba geesood ah oo laba dhinac ay maalgeliyaan isla markaana ilaaliyaan.
Miisaanka xiriirka ayaa dusha ka saarnaan doona iyada maadaama ninku uu xiriirka soo galay isaga oo aan runti doonayn.
5. Waxaad lumineysaa qiimahaaga
Heysashada qof aan runti kuu qabin dareen lamida mid aad adiga u qabto waxay kugu riixi kartaa inaad sameyso waxyaabo aadan caadiyan u sameyn lahayn si aad u hesho. Tani waxay kuu horseedi kartaa inaad lumiso qiimahaaga iyo isku kalsoonidaada.
Cayrsashada nin aanan kuu baahneyn runtii waa daal. Tani waxay kuu horseedi doontaa inaad waqtigaaga, tamartaada, maalkaaga iyo shucuurtaada aad ku bixiso qof aan soo celinayn – waana daal aad u weyn.
7. Murugo aan loo baahneyn
Waxaad sidoo kale dareemi kartaa murugo aan loo baahnayn markii aad la kulanto xaaladdan oo kale. Waad ogtahay inaad rabto inaad dareento jacayl iyo rabitaan, (qofwalbana wuu rabaa) markay tani dhici waydo, waxay u badan tahay inaad niyad jabto oo aad murugo dareento.
Maxaad isku galineysaa xaalad aad u murugooto sabab la’aan?
Marka gabdho, dantiina ayaa ku jirta inaadan ka daba cararin nin, gaar ahaan marka uusan xitaa rabin inaad ceyrsato. Waxaa jira sababo aan lasoo koobi karin oo xaalada noocaas ah aysan kuugu xaglin doonin.